Ulwazi lwethu lwamva.
ngu admin nge-20-04-27
Ipolymer ichazwa njengothungelwano olukhulu lweemolekyuli ezibandakanya iiyunithi eziphindaphindiweyo. I-polyimide luhlobo oluthile lwepolymer, equka imide monomers. Iipolyimides zinqweneleka kakhulu ngenxa yokumelana nobushushu, amandla oomatshini, kunye nepropathi ezinokubambisa. Yintoni i-Imide? Ukufumana ...
Yintoni esetyenziselwa i-polyimide? I-Polyimide isetyenziselwa i-tubing yonyango, umzekelo, i-vaste catheters, ekuxinzelelekeni koxinzelelo lwayo lokudibeneyo nokudityaniswa nokuguquguquka kunye nokumelana neekhemikhali. Umzi mveliso we-semiconductor usebenzisa i-polyimide njenge-adhesive ephezulu yokushisa; ikwasetyenziswa njengendawo yokulungisa uxinzelelo. ...
Njengombhalo we-dielectric okhangayo, i-polyimide isetyenziswe kakhulu kwicandelo lezinto ze-elektroniki, i-aerospace, kunye neemoto ezizalisekisa isidingo esinyukayo sezinto ezinokusebenza kakuhle phantsi kweemeko ezinzima, ezinje ngamaqondo obushushu aphezulu. Iipolyimides zikudidi olubalulekileyo lokukhula kwenyathelo ...